> Resource> iPhone> Olee otú iji undelete iPhone ndabere faịlụ
O nwere ike ime: Mgbe ị wee ọhụrụ iPhone 5 ma ọ bụ iPhone 4S, ị kpebiri inye gị ochie iPhone 4 gị mama ma ọ bụ ndị ọzọ. Mgbe mama gị wee maka ya, ị ekirikarị ya azụ iTunes na synced ya dị ka a ọhụrụ ekwentị, nke mere na mama gị nwere ike na-a kpam kpam "ọhụrụ" ekwentị. Mgbe ahụ ọdachi gara. Ochie iPhone 4 ndabere ehichapụ site ikpeazụ mmekọrịta. Nke ugbu a ndabere bụ efu, ị kwụsịrị ihe niile.
Ị nọ ebe a. Mgbe ahụ, m maa ị nwere ike izute ọdachi n'elu, ma na-achọ undeleted iPhone ndabere faịlụ. Enwela obi nkoropụ. Ị ka nwere ohere undelete gị iPhone ndabere, ma ọ bụrụ na i nwere ike ịhụ ihe site na isoro usoro e gosiri n'okpuru.
N'ezie, ndị ọhụrụ iTunes ndabere-apụghị Ewepụtara, n'ihi na data e overwritten, ma i nwere ike na-agbalị ịchọta gị aga na ndabere faịlụ. N'ezie iTunes na-eme ka iche iche backups nke ọ bụla mgbe mgbe ị weghachiri eweghachi gị iPhone. Ị nwere ike ịchọta ma ha na-adị ma ọ bụ. Ọ bụrụ na e nwere otu, ị nwere ike na-azụ akụkụ nke gị aga data dịkarịa ala.
Iji undelete iPhone ndabere, i nwere ike iji Wondershare Dr.Fone maka iOS (Mac iPhone Data Recovery), ma ọ bụ Wondershare Dr.Fone maka iOS (Windows iPhone Data Recovery). The software nwere ike inyere ịchọ gị niile iTunes ndabere faịlụ, na ka ị hụchalụ ha niile tupu mgbake.
Download ikpe mbipute n'okpuru maka free inwe a-agbalị.
Cheta na: Ka ịchọọ na undelete gị ochie iPhone backups, ị n'ezie na ike ibudata ọ bụla version nke usoro ihe omume n'elu, n'agbanyeghị na ị na-eji iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4 ma ọ bụ iPhone 3GS. Ha niile na-arụ ọrụ ahụ.
Nzọụkwụ 1. Chọọ gị ochie iPhone ndabere faịlụ
N'ebe a, anyị na-Windows version dị ka ihe atụ.
Ẹkedori omume na kọmputa gị mgbe wụnye ya. Mgbe ahụ, pịa naputa site na iTunes ndabere File n'elu nke isi window. Mgbe ahụ gị niile iPhone backups ga-akpaghị aka na-achọgharị na egosipụta dị ka ndị na. Ọ bụrụ na i nwere ike ịhụ ochie ndabere maka gị iPhone, ekele! Họrọ ya na pịa Malite iṅomi wepụ ya maka preview.
Nzọụkwụ 2. Preview na undelete iPhone ndabere
Doppler ga-ewe gị sekọnd ole na ole. Mgbe ahụ, ị ​​nwere ike ihuchalu niile ọdịnaya na ya, dị ka photos, video, ozi, kọntaktị, ndetu, wdg Kaa ha na pịa Naghachi na-azọpụta ha na kọmputa gị. Ugbu a ị na-aga nke ọma undeleted gị iPhone ndabere faịlụ.